Iindaba - Amanyathelo okuthintela nokulawula ubhubhane _ Ulwazi malunga nokuthintela ubhubhane
Amanyathelo okuthintela nokulawula ubhubhane _ Ulwazi lokuthintela ubhubhane
Inoveli yeCoronavirus Epidemic Measure Measure
Uluntu ngokubanzi lungazikhusela njani kubhubhane wenyumoniya?
1. Nciphisa utyelelo kwiindawo ezinabantu abaninzi.
2. Rhola umoya rhoqo egumbini lakho ekhaya okanye emsebenzini.
3. Soloko unxibe imaski xa unefiva okanye ukhohlela.
4. Hlamba izandla zakho rhoqo. Ukuba uvale umlomo kunye nempumlo ngesandla sakho, hlamba izandla zakho kuqala.
5. Musa ukurabha amehlo emva kokuthimla, thabatha ukhuseleko olulungileyo kunye nococeko.
6. Kwangelo xesha, uluntu ngokubanzi aludingi zigogo ngalo mzuzu, kodwa lunokuzikhusela ngeemaski.
Nika ingqalelo kwaye wenze uKhuseleko
Le ntsholongwane yinoveli yeCoronavirus engazange ifunyanwe ngaphambili.Urhulumente uyichazile le noveli Coronavirus usuleleko njengesifo esosulelayo esikumgangatho othile, kwaye wamkela amanyathelo othintelo nolawulo lwesifo esosulelayo seklasi. Inqanaba lokuqala lokuphendula kwimicimbi engxamisekileyo yezempilo yoluntu Ndiyathemba ukuba uluntu luya kuyikhathalele kwaye lenze umsebenzi olungileyo wokuyikhusela.
3. Luhamba njani uhambo?
Kuyacetyiswa ukuba usule ngaphakathi kunye nomqheba womnyango wezithuthi zikarhulumente kanye ngemini nge-75% yotywala. Ibhasi kufuneka inxibe imaski. Kucetyiswa ukuba ibhasi isule isiphatho somnyango nomqheba womnyango nge-75% yotywala emva kokusetyenziswa.
4. Nxiba imaski ngokuchanekileyo
Iimaski zotyando: Zingavimba ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-70 zebacteria. Ukuba uya kwiindawo zikawonke-wonke ngaphandle kokunxibelelana nabantu abagulayo, imaski yotyando yanele.Umaski wokukhusela kwezonyango (imaski ye-N95): inokuthintela i-95% yebhaktiriya, ukuba uya kudibana nesigulana kufuneka ukhethe le.
Ukuqhubela phambili kokucwangcisa ubhubhane, ukhuseleko kwimveliso yonke into uyibambe ngokuqinileyo.Ngamaxesha emfazwe, musa ukuthobela; Ngamaxesha othintelo kunye nolawulo, yenza umsebenzi olungileyo.Ukhuselo lokhuseleko lwenziwe, i-weichuang iya kuba nomso ngomso !!!
Ixesha Post: Jun-05-2020